KPI-yada & Qiyaasaha Muhiimka u ah Guusha Suuqgeynta Dijital ah ee 2022 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/KPI-yada & Qiyaasaha Muhiimka u ah Guusha Suuqgeynta Dijitaalka ah 2022
KPI-yada & Qiyaasaha Muhiimka u ah Guusha Suuqgeynta Dijitaalka ah 2022
KPI-yada iyo cabirrada aan ku siin aragti badan?
Miyaad ka booday cabbirada sababtoo ah waxay qaataan waqti badan?
Helitaanka xogta iyo caddaynta aad u baahan tahay si aad u gaadho go'aanno caqli-gal ah oo aad u ogaato arrimaha ka hor inta aanay waxyeello u geysan ganacsigaaga run ahaantii waa suurtogal.
Janaayo 26, waxaan dhexdhexaadiyay webinar la kafaala qaaday oo uu soo bandhigay Jonathan Laberge, Partner at SmartBI/Xamaaratada loogu talagalay CallRail.
Laberge wuxuu muujiyay sida KPI-yada saxda ah & cabbirada loogu isticmaali karo si looga faa'iidaysto fursadaha cusub ee ganacsigaaga.
Halkan waxaa ah dib u koobis degdeg ah oo webinar ah. Faahfaahin dheeraad ah, buuxi foomka si aad u gasho dhammaan webinar-ka.
Waxaa jira 2 Nooc oo Metrics ah
Tilmaamayaasha Waxqabadka Furaha (KPIs) waxay cabbiraan natiijooyinka, waxaadna u qaybin kartaa laba nooc:
Qiyaasaha la Dhaqan karo
Waa maxay Metrics Vanity?
Qiyaasta aan waxtarka lahayn ayaa adiga iyo ololeyaashaadu u muuqdaan kuwo wanaagsan.
Kuwani waa aragtiyo, aragtiyo xayeysiis, iyo taraafikada mareegaha, tusaale ahaan.
Laakiin miyay kuu sheegaan haddii aad gaadhayso yoolalkaaga ganacsi?
[Find Out] Isla markiiba u gal webinar-kan →
Waa maxay cabbirada la dhaqmi karo?
Halbeegyada la shaqayn karo waa KPI-yada kuwaas oo saameyn la taaban karo ku leh ujeedooyinka ganacsigaaga.
Waa inay ku siiyaan nambar aad isticmaali karto si aad tallaabo u qaaddo oo aad u qorsheysato waxa aad u baahan tahay inaad samayso marka xigta.
Halbeegyada la shaqayn karo ayaa suurtogal ka dhigaya in la saadaaliyo guusha xeeladaha suuqgeyneed.
Tusaale ahaan, ogaanshaha waxa ay ku kacayso in la helo macmiil cusub waxay ku abuurtaa saadaalin ganacsigaaga.
Macluumaadkan, waxaad go'aamin kartaa faa'iidada aad filan karto iyo inta ficil ee aad qaadi karto.
Tusaalooyinka Metrics Vanity & Metrics la Dhaqan Karo
Isku day inaad kordhiso iibka? KPI-yadaadu waxay noqon doonaan:
Muuqaallada bogga Qiimaha iibka macmiilka
Heerka soo bixitaanka Hogaamiyaasha laga soo saaray istaraatiijiyada warsidahaaga
Tirada macaamiisha ku xidhan warsidaha Heerka beddelka mareegaha
Tirada jecel Heerka kaqeybgalka
[Baro Runtaada, Metrics la Dhaqan Karo] Isla markiiba gal webinar-kan →
Sida Loo Sameeyo KPIs
Hadda oo aad ogtahay cabbirrada samaynta saamaynta, waa waqtigii aad dejin lahayd yoolalkaaga, ama KPIs.
Sannad kasta, ujeedooyinka ganacsigu way isbedeli karaan. Sidaa darteed, tixgeli saamaynta yoolalkaaga ganacsiga marka la dhisayo KPIs.
Raac tillaabooyinkan muhiimka ah markaad abuureyso KPIs:
Tallaabada 1: Deji ujeedooyinka ganacsigaaga.
Tallaabada 2: Xaqiiji in kanaalada ugu habboon si aad u gaarto ujeedooyinkaaga.
Tallaabada 3: Sii wad inaad ku dhaqanto.
[Ogow waxa tani ka dhigan tahay] Isla markiiba u gal webinar-kan →
Tallaabada 4: Xaqiiji tayada waxa aad cabbirayso.
Dalbashada KPI-yada Kanaalka Gaarka ah: Raadinta Wicista
Marka loo eego Iibka Insights Lab, 41.2% dadka wax iibisa waxay u isticmaalaan taleefankooda sidii qalabkooda wax-ku-iibsiga ee ugu waxtarka badan.
Markaa haddii aad tahay shirkad B2B, hal mitir oo muhiim ah oo lagu cabbiro waa raadraaca wacitaanka.
Ogaanshaha waxa kicinaya wicitaanadaas waa muhiim.
Raadinta wacitaanka ayaa ku caawin karta:
Samee kanaal la aamini karo oo qiimo badan.
Hel xog aan lahayn isbeddel tignoolajiyadeed oo la taaban karo.
Ku soo ururi xogta isha wicitaanada onlayn iyo offline
Hoos u dhig ereyada muhiimka ah si aad u tilmaanto kama dambaysta
Diiwaangeli baaqyada horumarinta joogtada ah.
Waa maxay cabbirrada la cabbirayo inta lagu jiro Daba-galka Wacyigelinta
Haddii aad tahay ganacsi ku tiirsan wicitaannada taleefanka si aad u kaxayso iibka, waxaad u baahan doontaa inaad cabbirto:
Waa maxay bogga(yada) ay soo saareen wicitaanada
Soo wacayaasha ku cusub vs.
Taleefannada laga jawaabay.
Wac ku habboonaanta.
SmartBi, Janaayo 2022
[Deji KPI-yada saxda ah] Isla markiiba u gal webinar-kan →
Sida Loo Sameeyo Saamaynta KPI-yada
Falanqee xogta oo u fasir si aad u go'aamiso sida aad u gaari doonto yoolalkaaga.
Laakiin ka waran haddii tirooyinka aad aragto aysan aad u fiicneyn?
Maxaad samayn kartaa si aad u abuurto saamayn?
Dib u eeg xeeladahaaga agagaarka:
Saldhig macmiil oo la hiigsaday.
Kanaalka la isticmaalo.
Daqiiqado xiriir ah.
Fariinta la isticmaalay.
Nuxurka/ xeeladda ereyga muhiimka ah ee ku saabsan walxahan.
Markaad taas sameyso, waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso haddii KPI-yadaadu dhamaantood hooseeyaan:
1. Ku ansixi Saldhigga Macmiilka.
Weydii dadka aan iibsan alaabtaada ama adeeggaaga sababta ay u iibsan waayeen.
2. Ku Go'aami Mugga Kanaalka, Dhaqanka, Erayada Furaha ee La Xiriira & Falanqee Wicitaannada Taleefannada.
Ka fikir safarka macmiilkaaga ka hor intaysan iibsan alaabtaada. Fahmo socodka dhacdooyinka ka hor intaysan tagin adeegaaga.
3. Waqtiyada Imtixaanka A/B & Farimaha Ku Socda Tixraaca KPI-yada.
Eeg waxa ku shaqeeya KPI-gaaga.
Haddii aadan ku guuldareysan, ma isku daydo.
[Ku ful himilooyinkaaga KPIs] Isla markaaba u gal webinar-kan →
Maanta, cabbiraadaha raadraaca ayaa ka badan wax la qaban karo.
Su'aal maaha sidaad ula socoto iyaga - waa su'aal ku saabsan waxa aad la socoto ee saamaynta ugu badan ku leh ganacsigaaga.
[Slides] KPIs & Halbeegyada Muhiimka u ah Guusha Suuqgeynta Dijital ah 2022
Waa kan bandhigga:
KPI-yada & Qiyaasaha Muhiimka u ah Guusha Suuqgeynta Dijitaalka ah 2022 ka Raadinta Wargeyska
Nagu Soo Biir Webinarkeena Xiga!
Ka Raadinta Lacag-Bixinta Adduunka Kukiye La'aanta: Diyaar Ma U Tahay?
Dhammaadka buskudka ayaa soo dhowaanaya, Google-na waxa ay dhawaan noqon doontaa beer gidaarad ah oo aan la geli karin oo loogu talagalay suuqlayda kuwaas oo ku guul daraystay inay la qabsadaan.
Baro sida looga faa'iidaysto raadinta lacag bixinta, uga gudubto dhibaatada weyn ee cookies, iyo mustaqbalka-caddayn suuqgeyntooda webinarkeena soo socda ee Febraayo 9, 2 pm ET.
Sawirka Muuqda: Paulo Bobita/Joornaalka Matoorka Raadinta
Guddiga Garsoorka ee Senate-ka Mareykanka ayaa ansixiyay sharci kale oo ka-hortagga kalsoonida kaas oo u oggolaanaya in dhinac laga saaro iOS
Sida Loo Bedelo Akhristaha Blog-gaaga Hogaamiye-Pop Ups
Sida Loo Xisaabiyo Wadarta Suuqa Lagaga Adreesan Karo (TAM) ee SEO
Sida loo cabbiro qiimaha SEO ee CTR
Sida Loo Sameeyo Qorshahaaga Xogta Instagram-ka
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Weydiimaha Raadinta iyo Erayada Furaha?
Ka fogow 6-dan Khaladaad ee Ololaha Dib-u- suuq-gaynta ugu sarreeya
7 Siyood Oo Loo Isticmaalo Qalabka Qoraalka AI Si Loo Abuuro Fikradaha Nuxurka
Aadida Caalamiga ah? Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato Glocal SEO
SEO ee aan macaash doonka ahayn: 7 Talooyin kaa caawinaya Ururkaaga in la helo
Shopping TikTok 101: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
10 Xeeladaha SEO Maxalliga ah ee Dhakhaatiirta iyo Ilkaha
Sida loo horumariyo EAT iyadoo la adeegsanayo raadinta semantic
TikTok ma noqon karaa makiinad wax raadisa? Isticmaalayaal badan, waa horeba
Sida loo tababaro shaqaaleysiinta SEO heerka gelitaanka si ay isla markiiba wax ugu biiriyaan
Talooyin ku saabsan ka fogaanshaha macluumaadka khaldan ee Kheyraadka SEO & Wadahadallada
Google ayaa tijaabisay qaab-dhismeedyo cusub oo muuqda
Aan ka hadalno Microsites & Ku-suuqashada Gaadiidka: Weydii SEO
Markaa waxaad rabtaa inaad noqoto Falanqeeye SEO ah: Xirfadaha, Mushaharka, & Rajada Shaqo
Isticmaalka PR dhijitaalka ah si aad u kasbato xiriiriyeyaasha iyo darajada ereyada muhiimka ah ee aad beegsaneyso
Intee ayay qaadataa in la arko natiijooyinka Link Building?
Tijaabada Google Search Console is barbar dhig sifada warbixinada waxqabadka
Maxaa ku jira SERP? Natiijooyinka raadinta Google iyo sifooyinka aad u baahan tahay inaad ogaato
DuckDuckGo waxay hoos uga dhacdaa 100 milyan oo goobood maalintii
Miyaan Isticmaalaa Balaaran Ama Kelmadda Isku-Darka Xun? Waydii PPC
11 Isbeddellada Suuqgeynta Waxyaabaha Tafaariiqda ah si aad u dhiirigeliso ololahaaga soo socda